Nanetry Tena i Mosesy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
INONA NO ATAO HOE FANETREN-TENA?
Mifanohitra amin’ny fireharehana sy fiavonavonana ny fanetren-tena. Tsy mihevitra ny hafa ho ambany ny olona manetry tena. Miaiky izy hoe tsy lavorary ka voafetra ihany ny zavatra vitany.
AHOANA NO NAMPISEHOAN’I MOSESY FA NANETRY TENA IZY?
Tsy nirehareha izy rehefa nomena fahefana. Vao omena fahefana kely fotsiny matetika ny olona, dia efa hita hoe manetry tena na tsia. Hoy i Robert Ingersoll, mpanoratra tamin’ny taonjato faha-19: “Mahavita miaritra zava-tsarotra ny ankamaroan’ny olona. Raha tianao ho fantatra anefa ny tena toetran’ny olona iray, dia omeo fahefana izy.” Tena nanetry tena àry i Mosesy raha izany ary hita tamin’ny zavatra nataony izany.
Nanana fahefana be mihitsy i Mosesy satria izy no nasain’i Jehovah hitarika ny firenen’Israely. Tsy nahatonga azy hirehareha mihitsy anefa izany. Hita, ohatra, izany rehefa nandamina olana lehibe momba ny fizarana lova izy. (Nomery 27:1-11) Sarotra taminy ny nanapa-kevitra, satria arakaraka izay holazainy tamin’izany no ho lalàna ho an’ny taranaka tatỳ aoriana.
Ahoana àry no nataon’i Mosesy? Nihevitra ve izy fa hahavita handamina an’ilay olana samirery satria izy no mpitarika ny Israelita? Nieritreritra ve izy hoe izy ihany dia hahavita hanapa-kevitra, satria efa mahay sy ela niainana ary mahalala tsara ny fomba fisainan’i Jehovah?
Tsy nanao an’izany i Mosesy satria tsy nirehareha. ‘Nentiny teo anatrehan’i Jehovah’ kosa ilay raharaha. (Nomery 27:5) Eritrereto ange e! Efa 40 taona teo ho eo i Mosesy no nitarika ny firenen’Israely. Tsy nanao izay tiany fotsiny anefa izy, fa niantehitra tamin’i Jehovah. Hita amin’izany fa tena nanetry tena izy.
Tsy nieritreritra koa i Mosesy hoe izy ihany no tokony homena andraikitra. Faly kosa izy rehefa nisy Israelita hafa navelan’i Jehovah haminany toa azy. (Nomery 11:24-29) Nanetry tena koa izy ka nanaraka ny torohevitry ny rafozandahiny mba hanendry olona hanampy azy amin’ny andraikiny. (Eksodosy 18:13-24) Mbola natanjaka tsara koa izy rehefa akaiky ho faty, nefa niangavy an’i Jehovah hanendry olon-kafa handimby azy. Rehefa notendren’i Jehovah i Josoa, dia nanohana tanteraka azy i Mosesy na dia zandriny aza i Josoa. Nasainy nankatò azy koa ny olona rehefa ho any amin’ilay tany nampanantenain’i Jehovah izy ireo. (Nomery 27:15-18; Deoteronomia 31:3-6; 34:7) Voninahitra tamin’i Mosesy ny nitarika ny Israelita hanompo an’i Jehovah. Tsy nirehareha tamin’ny fahefany anefa izy, fa nitady izay hahasoa ny hafa foana.
Tsy tokony hirehareha isika raha mahay na manana fahefana. Tadidio fa na mahay be aza isika, dia tsy hampiasa antsika mihitsy i Jehovah raha tsy manetry tena isika. (1 Samoela 15:17) Raha tena manetry tena isika, dia hiezaka hampihatra ny Ohabolana 3:5, 6 hoe: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao.”
Fantatsika tamin’izay nataon’i Mosesy koa fa tsy tokony hoheverintsika ho zava-dehibe loatra ny toerana na fahefana ananantsika.
Azo antoka fa handray soa isika raha miezaka manetry tena toa an’i Mosesy. Manamora ny fiainan’ny olona mantsy isika amin’izany ka ho tian’izy ireo. Ho tia antsika koa i Jehovah, ilay Andriamanitra manetry tena. (Salamo 18:35) “Manohitra ny manambony tena” mantsy izy, fa “maneho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa kosa amin’ny manetry tena.” (1 Petera 5:5) Tokony handrisika antsika hanetry tena toa an’i Mosesy izany.